ငွေငါးထောင်တန်၊ တစ်သောင်းတန်တွေရုပ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုတာ တစ်ကယ်လား? – Think Before You TRUST
Home>>သတင်းအတုစစ်ဆေးခြင်း>>နိုင်ငံရေး>>ငွေငါးထောင်တန်၊ တစ်သောင်းတန်တွေရုပ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုတာ တစ်ကယ်လား?
Thin ZarFebruary 3, 2021
နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြားထဲက ဒီလို ငွေငါးထောင်တန်၊ တစ်သောင်းတန်တွေ ရုပ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုပြီး ယခုနေ့မှာပဲ သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ဒီသတင်းအပြင် ဘဏ်များပိတ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ဒီလိုပေါ်ထွက်လာတာက ဘယ်နေရာကရယ်လို့မရှိဘဲ ကောလဟာလအနေနဲ့သာ ပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတွေးပြီးမှယုံက စစ်ဆေးကြည့်ရာမှာတော့ သတင်းမှားဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ ကျပ်၅၀၀၀တန်၊ ကျပ်၁၀၀၀၀တန်ရုတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေနဲ့ ဘဏ်တွေပိတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာ သတင်းမှားများဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
RFA သတင်းဌာနမှလည်း ငါးထောင်တန်၊ တစ်သောင်းတန်တွေရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတာ ကောလဟာလဖြစ်ကြောင်း ဗဟိုဘဏ်က ပြောသွားကြောင်းကိုလည်း သတင်းရေးသားခဲ့တာကို ဒီမှာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အခုလိုအချိန်မှာ ကောလဟာလသတင်းတွေကြောင့် ပြည်သူများစိုးရိမ်ပူပန်ပြီး ဘဏ်တွေမှာ ငွေတွေထုတ်ယူနေကြောင်းလည်း ကြားသိရပါတယ်။ အခုလိုသတင်းမှားတွေဟာ လတ်တလောကာလမှာ ပို၍ ပြန့်နှံ့လာနိုင်တာကြောင့် တွေးပြီးမှယုံရဲ့ သတင်းဖတ်ရှုသူတွေအနေနဲ့ သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သတင်းတု၊သတင်းမှားလို့ ထင်မြင်မိပါက မိမိကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးကြည့်တာမျိုးပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ သတင်းစစ်ဆေးဖို့အခက်အခဲရှိရင်လည်း တွေးပြီးမှယုံရဲ့ Chat box ဒါမှမဟုတ် အချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန်အကြောင်းကြားလွှာ သို့အချက်အလက်များပေးပို့ပြီး လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်။